को एशिया | मा जागिर कसरी पाउने. | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
क्यारियर|कसरी काम पाउन
कसरी काम पाउन
कसरी काम पाउन – where to find job openings
यहाँ तपाईं को लागि जब हेर्न सक्छन् चार तरिकाहरू छन्:
• तपाईं जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो मित्र भन्नुहोस्
धेरै जब तपाईंलाई थाहा मान्छे माध्यम फेला. जस्तै, मित्र एक रेस्टुरेन्ट मा एक कुक रूपमा काम बारे सुन्नुहुन्छ. त्यो तिमी खाना पकाउन गर्न चाहनुहुन्छ थाह छ र त्यो तपाईं लागू गर्न बताउँछ त तपाईं एक काम को लागि देख रहे. साथीहरू र तपाईं जागिर प्राप्त गर्न सक्छन् जसले तपाईंलाई थाहा अन्य भइरहेको नेटवर्क भइरहेको भनिन्छ. मित्र को एक ठूलो नेटवर्क एक साना भन्दा राम्रो छ.
यो तपाईं आफ्नो घर देशबाट र अन्य अमेरिकी मानिसहरूलाई साथी बनाउन प्रयास महत्त्वपूर्ण छ. यी मित्र तपाईं जागिर पाउन मदत गर्न सक्छ. तपाईं सबैलाई बताउन गर्नुपर्छ तपाईंलाई थाहा तपाईं जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ. जस्तै, तपाईं आफ्नो परिवार सल्लाहकार अनुरोध गर्न सक्छ, आफ्नो छिमेकी, तिम्रो साथीहरु, र आफ्नो चर्च वा मस्जिद मा मान्छे यदि तिनीहरूले कुनै पनि काम खुलने को ठेगाना.
मान्छे भन्नुहोस् के तपाईं काम को लागि देख र काम कस्तो तपाईंले खोजिरहेको भनेर.
• आफ्नो छिमेकी व्यवसाय हेर
तपाईं आफ्नो छिमेकी वरिपरि हिंड्न र भन्न भनेर नजिकै कारोबार को Windows मा संकेत लागि हेर्न सक्छन् “सहयोग चाहियो।” यो व्यापार राखने कर्मचारीहरु छ मतलब.
• एक रोजगार कार्यालय मा साइन अप
धेरै शहर तपाईं काम को लागि खोज सहायता कि रोजगार कार्यालय छ. तपाईंको resettlement एजेन्सी शायद पनि काम खोज्न मदत गर्नेछ. तिनीहरूले पहिले नै मदत यदि तपाईं आफ्नो पहिलो काम पाउन, तपाईंले तिनीहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँ नयाँ काम को लागि खोज गर्दै छन् र तिनीहरूले फेरि तपाईंलाई मदत गर्न सक्षम हुन सक्छ.
• खोज अनलाइन
आज, सबै भन्दा जब अनलाइन पोस्ट हुन्छन्. कामको लागि अनलाइन देख को लाभ को केही तपाईं रुचि राख्नुहुन्छ काम को प्रकार को लागि विशेष हेर्न सक्छन् छन्, स्थान र घण्टा तपाईं चाहनुहुन्छ संग. तपाईं एक कम्प्युटर छैन भने, तपाईं को लागि जब हेर्न निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय मा कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
कामको लागि अनलाइन देख मान्छे कम्प्युटर प्रयोग गर्न नयाँ लागि गाह्रो हुन सक्छ. कुनै एक जन्म भएको एक कम्प्युटर कसरी प्रयोग गर्ने थाह सम्झना, सबैलाई सिक्न थियो, र तपाईं सिक्न सक्छौं कि, धेरै. अभ्याससँगै, यो तपाईं थप परिचित हुनेछ. त्यहाँ साँझ कक्षाहरू पुस्तकालयहरु छन्, धेरै समुदायमा विद्यालय र रोजगार केन्द्र कसरी आफ्नो काम खोज मा कम्प्युटर प्रयोग गर्न मान्छे सिकाउन. कक्षाहरू लागि RCO गरेको डेटाबेस खोज आफ्नो शहर मा.
यहाँ तपाईं अनलाइन लागि जब खोजी गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ केही वेबसाइटहरूले छन्:
यो तपाईंको शहर मा नोकरी को लागि खोजी गर्ने राम्रो वेबसाइट. आफ्नो शहर प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईँले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको क्षेत्रमा नयाँ जब लागि.
यो वेबसाइट नाफारहित जब धेरै छ. शरणार्थी कहिलेकाहीं जब अन्य शरणार्थी काम पाउन सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि तपाईँले एक भन्दा बढी भाषा बोल्न.
तपाईं अनलाइन मा जब हेर्न रूपमा, तपाईं काम वर्णन बुझ्न आवश्यक हुनेछ.
तपाईं काम को लागि एक राम्रो फिट छन् भने थाहा, तपाईं काम को लागि योग्यता पाउन चाहनुहुन्छ हुनेछ.
जस्तै प्रमुख शब्दहरू खोज्न न्यूनतम, हुनै पर्छ, हुनै पर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यकताहरु, र कम्तिमा कौशल के पाउन, अनुभव र शिक्षा काम प्राप्त गर्न आवश्यक छ.
यो तपाईं काम को लागि योग्यता को राम्रो समझ छ र तपाईं आवेदन गर्नु अघि योग्यता छ कि धेरै महत्त्वपूर्ण छ. के तपाईं बुझ्न देखाउने र स्थिति को लागि योग्यता हुन सक्छ भने, तपाईं एक साक्षात्कार प्राप्त गर्न राम्रो मौका र काम प्राप्त हुनेछ.